Umahluko kombono ngokomoya kunye nombono
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Umahluko kombono ngokomoya kunye nombono
Ngaba uyawazi umahluko phakathi umbono yokomoya nombono? Ekubeni
amagama kwakhona efanayo, kodwa lisenokubhidekisa, ngokuba umbono yokomoya nembono yinto eyahlukileyo, masenze sikhe ukwenzela ukuba ukwazi ukuxelela ngokuqinileyo umahluko.
nombono ngokomoya umbono
lokuqala ngokomoya, kodwa iye yachazwa ngokuphindaphindiweyo kule sayithi, siya kuchaza kwakhona. Ngu
umbono izangoma kunye ngokomoya, ihlabathi akufunekanga kubonakala kakhulu xa ingqondo oosiyazi ukuba iprojekthi ngeso, ubizwa ngokuba umbono ingcali ngokomoya ukuze achaze oko kuboniswe phaya Umbuzo .
Ngokukodwa, ibonisa ukuba imimoya umgcini ezingxoxo kaThixo, kubonakala kukho baninzi ufumana umyalezo ukusuka apho zayo. Izangoma abenza ukuba ukugqithisa umyalezo ukusuka umoya umlondolozi.
umoya ngumlondolozi ukuba wonke umntu, kodwa sibeka ngaphandle umyalezo lokukhokela ikamva labantu balo ukuba alungileyo, thina akukho izangoma, kuba awukwazi ukufumana umyalezo ngqo, izangoma ufumana umyalezo ukubuza asihlole litchi buqu.
ngokuthi, umzekelo, neemvakalelo oyinyaniso nengqondo ngenjongo ndoda, ungafumana ulwazi aliveli ekuqaleni.
umbono ngokomoya, ezifana imvakalelo lo myalezo kunye injongo elinye iqela oomoya umgcini, nangona amandla lokubona engabonakaliyo, abe isifundo injalo kukuba wayeza kuvela into ekuqaleni, ngokomzimba kuyinto ethile.
umzekelo, ngokuba yakhe kude distance relationship elide kukuthi ezinye ifomu okho, kodwa unako ukubona ukuba zibekwe kufutshane, ingabonakali kuba kude.
ngale ndlela, ingabonakali kude, ngokuba kwingqiqo amandla ukuze ubone ukuba ayikwazi ubonwe ukuba sele kuvalwe into. Okanye, ungafuna okanye abize njengokubukela ekude, ukubukela ekude, clairvoyance.
lowo ukude, kodwa nini yaye phi ezifana yokuziphatha njengoko kubonakala ukusuka ngaphandle koko kuthethwayo kubonakala ukufa, njengaxa bengqondo yakhe nengqondo ngelo xesha, ayibonakali exabisekile ayibonakali ngamehlo akukho nto.
Nguwo lo ke umahluko phakathi umbono uqikelelo yokomoya nembono.
xa zisetyenziswa kakuhle lo mbono yokomoya nembono Ekubeni
umbono ngokomoya yaye nembono umthamo ezahlukeneyo ngokupheleleyo, ngokuxhomekeke izangoma, kukho abantu bakwazi ukubona kuphela nabantu abangakwaziyo kuba umbono ngokomoya kuphela. Ngaba abantu ukuba iingxaki kunokuba zombini umbono ngokomoya nokubukeka, kodwa ukuba kukho enye kuphela okanye enye ye izangoma, akayi kwaye ukwahlula ngokuvumelana engxakini.
njengoko kuchazwa nje, le meko njengoko izinto ezikude, xa usibona ngaphandle, ukuba ufuna ukubona into ezikhoyo, ezifana lungabonakala ngokwakho ukuba uya ukuqonde abantu behleli-apho, ingqondo yakhe ezifana injongo yokwenene, leyo, makhe khetha asihlole umbono ngokomoya ukuba ufuna ukwazi izinto ayibonakali ngeliso lenyama.
umbono ngokomoya maxa wambi baphambuke
Ukuba uyathandabuza okanye imboniselo ngokomoya ngombono, kodwa ungafuna okanye na ukuba ndibe Tazunere le izangoma original ngubani zombini unako, into ebizwa ngokuba umbono ngokomoya, ukuhambelana thethwano kunye kwamaza njengoko izangoma kwezinye, kukho umahluko ngamnye kule vidiyo ukuba kwi ingqondo, kukho kwakhona iqela Utsushidase ezintle hayi akunjalo. Ukuba ubona i
kangangoko kunokwenzeka embetha oomoya aphezulu apreyizali umbono lilonke, kufuneka ukuba izithathele ingqalelo zokungahambisani isakhono oosiyazi kwakunye wakho. Nto, "ngenxa yokuba zombini umbono yokomoya nokubukeka, Hayi, ukuba uzame ukubuza utitshala ●●"
nabo bacinga ukuba, eyona nto ●● ngutitshala kunye ukuhambelana yakho, iziphumo ze-apreyizali umbono nguMoya oluthembekileyo akubi.
ukuba, kukwabalulekile ukuba ukufumana utitshala ukuhlangabezana ehambelanayo kwaye ibanga umbono ngokomoya kuphela.